२४ घण्टामा थपिए २६० कोरोना संक्रमित - Gaunbeshi
Posted on २४ चैत्र २०७७, मंगलवार १७:३३ Author punam punma Comment(0)
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २६० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार चार हजार २४३ जनाको परीक्षण गर्दा २६० मा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो अपडेटसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ७८ हजार ४७० पुगेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ११३ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । कोरोना मुक्त हुनेमा ७३,४५५ पुगेको छ । कोरोना बाट हालसम्म नेपालमा तीन हजार ३६ जनाको निधन भएको छ ।
Posted on ५ माघ २०७७, सोमबार १०:३४ Author Gaunbeshi
एजेन्सी । भारतमा आइतवारवाट सर्वसाधारणले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेका छन् । तर खोपको नकारात्मक असर पनि देखिन थालेको छ । कोरोना खोप लगाउँदा ‘साइडइफेक्ट’ देखिनेको संख्या ४४७ पुगेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । जस मध्य ३ जना अस्पताल भर्ना भएका छन् । भारतमा कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउँदा ‘साइडइफेक्ट’ ९प्रतिकूल प्रभाव० देखिनेको संख्या ४४७ पुगेको […]
Posted on १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १९:१६ Author Gaunbeshi
चिया र चुरोट एकसाथ पिउनु कति ख’तर’नाक ?
Posted on १ फाल्गुन २०७७, शनिबार १०:०१ Author Gaunbeshi
एजेन्सी। धेरै व्यक्तिको चिया पिउने बानी हुन्छ । कोही कोही त चियाको शौखिन नै हुन्छन् । चियाको शौख हुनेहरु दिनमा १०र१० कप पनि चिया पिउने गर्छन् । अत्यधिक चिया पिउनु स्वास्थ्यका लागि बेफाइदाजनक हुन्छ । अत्यधिक चिया पिउने मात्र होइन कतिपयले चियासँगै चुरोट पिउने आदत पनि बसालेका हुन्छन् । चियासँग चुरोट पिउँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर […]
ट्रक दुर्घटना हुँदा एकजनाको निधन
यस्तो छ तपाईको भाग्य श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरि चैत्र २५ गते बुधबार, राशिफल जान्नुहोस्
Posted on १९ चैत्र २०७७, बिहीबार १५:०३ Author punam punma
Posted on ६ चैत्र २०७७, शुक्रबार १६:२१ Author punam punma
आफ्नो जन्म दिनमा दल बहादुर जि. सिले असाय दिन दु:खीहरुलाई आफ्नौ हातबाट यसरी खाना खुवाए पछि (भिडियो हेर्नुस्)
Posted on २ फाल्गुन २०७७, आईतवार २१:२५ Author Gaunbeshi
Posted on ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ११:४८ Author Gaunbeshi